18 USC § 2257 / 2257A - Abafana Bothando - Bl - Bl Manga - Bl Webtoon - Yaoi - Yaoi Manga - Yaoi Hentai
Ngokuya nge-Digital Millennium Copyright Act ka-1998 (i-US Copyright Office), abanikazi nabaqhubi be-
IB Boyslove.me izophendula ngokushesha kwizimangalo zokwephulwa kwelungelo lobunikazi ezibikwe kummeli we-copyright oqokwe yi-Boyslove. Sicela wazi ukuthi ngaphansi kwesigaba 512 (f) se-DMCA (17 USC § 512 (f)), noma imuphi umuntu omela kabi lokho okuqukethwe noma umsebenzi owephulayo angaba nesikweletu.
Uma ukholelwa ukuthi umsebenzi wakho wobhalile ukopishwe ngendlela eyenza ukwephulwa kwe-copyright, sicela unikeze umenzeli we-copyright we-Boyslove imininingwane elandelayo:
Isiginesha esingokomzimba noma se-elektroniki somuntu ogunyaziwe ukuba enze egameni lomnikazi weli lungelo elikhethekile okusolakala ukuthi liphulwa;
Ukuhlonza umsebenzi onelungelo lobunikazi obuthiwe wephuliwe, noma, uma ukwephulwa kwamalungelo obuningi amaningi kusayithi elilodwa eliku-inthanethi kumbozwe ngesaziso esisodwa, uhlu lwabamele imisebenzi enjalo;
Ukukhonjwa kwento ethi yephula umthetho noma kungathiwa iyinto yokwephula umthetho futhi okuzosuswa noma ukufinyelela kuyo okuzokhutshazwa, nolwazi olwanele ukuvumela i-Boyslove ukuthi ithole leyo nto (njenge-URL noma inombolo yevidiyo);
Imininingwane yanele ukuvumela i-Boyslove ukuthi ikuthinte: igama, ikheli, i-imeyili, inombolo yocingo, uma ikhona;
Isitatimende sokuthi iqembu elikhonondayo linokholo oluqinile lokuthi ukusetshenziswa kwento ngendlela okukhalazwa ngayo akugunyaziwe ngumnikazi we-copyright, umenzeli wakhe, noma umthetho; futhi
Isitatimende sokuthi imininingwane ekulesi saziso inembile futhi, ngaphansi kwesigwebo samanga, ogunyaziwe ukuthi wenzele umnikazi welungelo elikhethekile okusolwa ukuthi lephuliwe.
Isitatimende sokuhambisana sokuthobela.
IB Boyslove.me ayisiye umkhiqizi wanoma yikuphi futhi konke okuqukethwe okutholakala kuwebhusayithi (Boyslove.me). Mayelana namarekhodi ngokwe-18 USC § 2257 yanoma yikuphi okuqukethwe konke okutholakala kule sayithi, sicela ngomusa uqondise isicelo sakho kusayithi lapho okuqukethwe kukhiqizelwe khona.
IB Boyslove.me ayisiye umkhiqizi wanoma yikuphi futhi konke okuqukethwe okutholakala kuwebhusayithi (Boyslove.me) njengoba kuchazwe yi-18 USC §2257 kanye ne-28 CFR 75 ngakho-ke ayikhululekile kuzimfuneko zokugcina amarekhodi.
IBoyslove.me yisiza sokwabelana ngezithombe esivumela ukulayishwa, ukwabiwa kanye nokubukwa kwezinhlobo ezahlukahlukene zokuqukethwe kwabantu abadala kanti ngenkathi i-Baboylove.me yenza konke okusemandleni ekuqinisekiseni ukuthobela.
IB Boyslove.me ihambisana nalezi zinqubo ezilandelayo ukuqinisekisa ukuhambisana:
Kudinga ukuthi bonke abasebenzisi babe neminyaka engu-18 ubudala ukuze balayishe izithombe.
Lapho ulayisha, umsebenzisi kufanele aqinisekise okuqukethwe; aqinisekise ukuthi uneminyaka eyi-18; fakazela ukuthi ugcina amarekhodi amamodeli kokuqukethwe nokuthi bangaphezu kweminyaka engu-18 ubudala.
Qinisekisa ukuthi okuqukethwe okulayishwayo kungokwomsebenzisi noma banelayisensi esemthethweni yokulayisha, ukushicilela, nokwabelana ngokuqukethwe okuseduze.
Sikholelwa ngokuqinile ukuthi bonke onobuhle, abalingisi, abalingisi, nabanye abantu ababoniswe ekubonisweni kwezocansi okucacile kule webhusayithi babeneminyaka engu-18 noma ngaphezulu ngesikhathi sokudalwa. Sikholwa ngokuqinile ukuthi wonke umkhiqizi okuqukethwe kwakhe okuvela kuleli sayithi kuhambisana ne-18 USC §2257, kumawebhusayithi / amawebhusayithi abo.
IB Boyslove.me ithembisa ukwenza konke okusemandleni ukuthola nokuqeda izithombe ezihlukumezayo noma / namavidiyo.
Ukuthola olunye usizo, sicela uthinte [i-imeyili ivikelwe] ukuthobela.
Finyelela kuzo zonke izindawo
Isahluko 60 January 21, 2022
Isahluko 59 January 21, 2022
Isahluko 26 January 21, 2022
Isahluko 25 January 21, 2022
Isahluko 23 January 21, 2022
Isahluko 22 January 21, 2022
Ngaphansi Kokukhanya Okuluhlaza
Isahluko 37 January 21, 2022
Isahluko 36 January 21, 2022
Isahluko 38 January 20, 2022
Isahluko 37 January 20, 2022
Isahluko 38.1 January 20, 2022
Lapha ukuthola amaManga adumile